Ukupheka kwe-6 aphrodisiac ukuthuthukisa isifiso sakho socansi - AFRIKHEPRI FOUNDATION
NgoLwesihlanu 23 Agasti, 2019
Ngaphandle kokuphazamiseka kwezikhali, impi ibhubhisa imiphefumulo
Umbuzo ongenakwenzeka - Jiddu Krishnamurti (Audio)
Usosayensi uthatha umphefumulo ushiya isidumbu sakhe somuntu ngesikhathi sokufa kwakhe
Umdlalo wevidiyo e-Afrika: amathuba namafa
Age Aquarian (PDF)
Izimfihlo zamandla akho okuphulukisa - uWayne Dyer (Umsindo)
By I-AFRIKHEPRI FOUNDATION ngoJulayi 1, i-2019
Iziphuzo kanye nezitsha ukulungiselela ukunciphisa ikhanda lakho othandweni. Engeza inhlansi yothando ngokulungiselela isisiphakamiso noma isitsha se-aphrodisiac ngobusuku obushisayo phakathi kwabathandi. Phila kusihlwa esingenakulibaleka, ugcwele charm kanye nesifiso. Izingxenye ze-cocktails kanye nezitsha ezihlinzekwa yizo zonke izinto zemvelo futhi ezijwayelekile zase-Afrika. Ungathola kalula lezi zitshalo phakathi kwabamhlophe base-Afrika.
1) Uthando lwama-Afro
I-50 decoction ye-Bissap entsha (i-hibiscus Safdariffa)
I-25 g sinamoni (oluyimpuphu) (i-cinnamom zeylanicum)
I-35 g i-ginger fresh (igayiwe) (zingiber officinale)
I-2 nezinkezo ze-soup honey
I-sinamoni enamandla, i-ginger noju enqamula i-decoction ye-Bissap, vumela ama-macerate ngezinsuku ezingu-3.
Hlunga isiphuzo bese ugubha ngamandla ngaphambi kokukhonza
Phuza amaminithi we-30 ngaphambi kobulili bobulili.
I-2) I-Aphro romance
I-15 g ye-maniguette (i-powdered) (Aframomum Melegueta)
I-1 / 2 isipuni sepelepele (i-Xylopia aethiopica)
I-1 ingilazi ye-Bissap ye-decoction (i-hibiscus Safdariffa)
Engeza ekwenzeni i-Bissap i-maniguette powder, uju kanye ne-guinea pepper.
Hlanganisa kahle imizuzu ye-2, bese umela imizuzu ye-10. Hlunga isiphuzo,
ufake ibhodlela elincane bese udla ngamanani amancane.
I-NB: Yidla kakhulu okubabayo.
I-3) Isifiso se-Afro
I-30 g ye-maniguette powder (Aframomum Melegueta)
I-1 / 2 ilitha le-decoction ye-Bissap (i-hibiscus Safdariffa)
5 g uju
Beka maniguette powder macerated e 1 / 2 ilitha decoction we bissap endaweni emnyama ekamelweni lokushisa izinsuku 6. Hlunga ingxube, engeza ama-4 wezipuni uju bese uxuba isikhathi eside.
Thela ibhodlela, uphawu bese uphuza ingilazi ye-1, ihora elilodwa ngaphambi kokuzama ukwenza ucansi.
I-4) I-Hot Aphro
½ isipuni sepelepele (Xylopia aethiopica)
½ ithisipuni i-ginger powder (zingiber officinale)
I-20 yejusi le-Bissap (i-hibiscus safdariffa)
Sishisa izithako. Vumela ukupholisa, ukuhlunga nokuphuza ingilazi ye-1, ihora le-1 ngaphambi kothando lwakho olushisayo ebusuku.
5) Ukukhululwa kwe-Afrika
I-1 / 3 yamanzi kalamula
I-2 / 3 ye-Bissap emhlophe (i-decoction)
I-1 isipuni soju
Shake ngeqhwa bese ukhonza!
I-6) Ijusi le-lemon nge-ginger
Inani labantu: 2
Isikhathi sokulungiselela: 15 mn
Isikhathi sokuphumula: amahora angu-2 esiqandisini
100 g ushukela oluyimpuphu
1 c. we-Aframomum melegueta
Ama-gingers amasha we-2
I-1 i-bong of lemongrass
Gcina ama-gingers namaqabunga e-lemongrass.
Cindezela ama-lemons bese uwaxuba nge-ginger, amaqabunga e-lemongrass kanye ne-melegueta powder.
Phakamisa ijusi ngaphambi kokwengeza ushukela.
Cool 2 efrijini ngaphambi kokudla.
Usuke usabela "Ukupheka kwe-6 aphrodisiac ukugqugquzela ..." Imizuzwana embalwa edlule